नेपालबाट गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता,समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ ! « Swadesh Nepal
नेपालबाट गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता,समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ !
नेपालमा १०।१५ जना दुष्ट र गद्दारहरुका कारण नेपालको भविष्य अन्धकार ! राजा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री गिरिजा नै राष्ट्रप्रमुख बन्नु त्यहीँबाट प्रारम्भ हुन्छ नेपालको अधोगति, राष्ट्रघात र विदेशीहरुको अत्यधिक चलखेल । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता, समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ !
भारतमा अंग्रेजी साम्राज्यको दबदबा बढ्न लागेपछि यस क्षेत्रका हिन्दुपति सेनवंशी राज्यहरु– मकवानपुर, पाल्पालगायत कास्की, बाइसी, चौबीसी, कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर आदि जस्ता स–साना स्वतन्त्र हिन्दु राज्यहरुलाई कब्जा गर्न खोजिरहेको अवस्थामा यो क्षेत्रका ५४ भन्दा बढी स–साना हिन्दुराज्यहरुलाई पृथ्वीनारायण शाहले मिलाएर विशाल नेपालको एकीकरण गरेर बनेको नेपाल हिन्दुअधिराज्य हो । २०६८ सालको जनगणनामा हिन्दुलाई अल्पमत बनाउन देशी विदेशी षडयन्त्रहरु अगाडि सारेर हिन्दुधर्म नलेखाउन चौतर्फी अनेकौं षडयन्त्र र दबाब गरे तापनि लगभग ८३ प्रतिशत हिन्दुहरुको संख्या देखियो । ॐकार परिवारभित्रका बौद्ध, किरात, जैन, शिखधर्म समेत हिसाब गर्दा ९६ प्रतिशतभन्दा बढी हामी ॐकार परिवार रहेको प्रमाणित भएको छ । यस्तो मुलुक पनि धर्मनिरपेक्ष रहनुपर्ने ?
अत्यधिक बहुमतमा रहेको हिन्दुअधिराज्य विस्थापित गर्ने कुरा हामी स्वाभिमानी नेपालीहरुबाट धर्मनिरपेक्षको कदापि समर्थन हुनेछैन ।
वास्तवमा २०६२ साल मंसिरमा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने र त्यसको समर्थन गर्नेहरु जो जो हुन् ती सबै देशद्रोही हुन् । १२ बुँदे सहमतिले नै विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएर देशको यसरी बेहाल बनाएका हुन् । नेपालमा २०४७ सालको संविधानले काम गर्दागर्दै देशलाई यस्तो लथालिङ्ग बनाउन संविधानसभाबाटै अर्को संविधान बनाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन ।
२०६३ सालपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको नाममा जवरजस्त रक्तपातपूर्ण रुप लिनखोजे पछि राजा ज्ञानेन्द्रबाट सम्झौता गरेर आन्दोलनकारी नेताहरुलाई शासनभार जिम्मा लगाएपछि राजसंस्थालाई धोका दिएकै कारण हो अहिलेको अन्धकार । यो राजनीतिक धोका हो । २०४७ सालको संविधानअनुसार राजासँगको सम्झौता गरेर क्रमशः राजा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री गिरिजा नै राष्ट्रप्रमुख बन्नु त्यहीँबाट प्रारम्भ हुन्छ नेपालको अधोगति, राष्ट्रघात र विदेशीहरुको अत्यधिक चलखेल ।
संसदमा समानुपातिक प्रणालिको दुरुपयोग भएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । यसले कसैको हित गर्दैन । शक्तिमा रहेकाले आफ्नी श्रीमती, रखौटी, नोकर, आफ्नो कार्यकर्ता मात्र सिफारिस गर्ने हुँदा यस्तो प्रणाली पूरा हटाएर संसदको माथिल्लो सदनमा पिछडिएको क्षेत्र वा पिछडिएका जाति, वा समूहबाट योग्य व्यक्ति राज्यले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
संघीयताको बारेमा कुरा गर्दा भारतमा संघीयताको कस्तो दशा छ भने एक राज्यका नागरिकले आफ्नो योग्यताअनुसार भारतको अर्को राज्यमा जागिर खान नै पाउँदैन, भारतमा उही राज्यको नागरिक हुनुपर्छ । त्यस्तै कुनै राज्यका नागरिकले आफ्नो जग्गा बेच्न चाह्यो भने त्यही राज्यका नागरिकहरुले मात्र किन्न पाउँछन् अर्को राज्यका नागरिकले जग्गा किन्न नै पाउँदैन । सरकारी सेवामा जागिर खान पनि त्यही राज्यको नागरिकले मात्र जागिर खान पाउँछ । जतिसुकै योग्यता हासिल गरेको भए तापनि अर्को राज्यका नागरिकले अर्को राज्यमा जागिर खान पाउँदैन । जस्तै आसामको नागरिकले बिहार वा बंगाल वा अर्को राज्यमा जग्गा किनबेच गर्न पाउँदैन र जागिर खान पनि पाउँदैन । अब नेपालमा पनि भारतको सिको गरेर त्यस्ता रोगहरु सल्केर नेपाल अधिराज्यका नेपाली नागरिकहरुको स्वतन्त्रतामाथि हनन् हुन सक्छ ।
तराईका जनताको समस्या र जनजातिहरुमा पीडादायी समस्याहरु छन् । त्यसको निराकरण गर्न राज्यले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर त्यसबाट प्राप्त सुझावहरु र मागलाई कार्यावयन गर्ने वचनवद्धता गरी यसैबाट मधेसी र पहाडी पीडित समूह, दलित र जातीय समस्या निराकरण गर्न सकिन्छ । अत: गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता,समानुपालीक प्रणालि खारेज गर्नुपर्छ !
भारतमा अंग्रेजी साम्राज्यको दबदबा बढ्न लागेपछि यस क्षेत्रका हिन्दुपति सेनवंशी राज्यहरु– मकवानपुर, पाल्पालगायत कास्की, बाइसी, चौबीसी, कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर आदि जस्ता स–साना स्वतन्त्र हिन्दु राज्यहरुलाई कब्जा गर्न खोजिरहेको अवस्थामा यो क्षेत्रका ५४ भन्दा बढी स–साना हिन्दुराज्यहरुलाई पृथ्वीनारायण शाहले मिलाएर विशाल नेपालको एकीकरण गरेर बनेको नेपाल हिन्दुअधिराज्य हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारभरि राष्ट्रियताको लहर जाग्यो । इजरायललाई यहुदी राष्ट्र घोषित गरियो । नेपाल जस्तो हिन्दुस्थललाई पनि किन संविधानमा नै हिन्दुअधिराज्य उल्लेख नगर्ने भन्ने मनसायबाट मात्र २०१९ सालको संविधानमा नेपाललाई हिन्दुअधिराज्य उल्लेख गरिएको हो ।
हिन्दुअधिराज्य, राजसंस्था बारेमा जनमतसंग्रहको पनि कुरा उठाइन्छ । तर जनमतसंग्रह बारेको नेपालको संवेदनशीलता नबुझी हचुवाका भरमा बोल्नु हुँदैन । यहाँ राजसंस्था र हिन्दुअधिराज्य बारेमा जनमतसंग्रह भयो भने रगतको खोलो बग्छ । अमेरिका र युरोपका इसाई राष्ट्रहरुको उहाँ उपद्रो मचिन्छ, पैसाको खोलो बग्छ, भारत, चीन पनि रमित भएर बस्दैनन् । जनताको विचारको कदर हुँदैन । हिन्दुहरुको बाहुल्य समाप्त गर्न हिंसा प्रारम्भ हुन्छ । सर्वसाधारण जनता डरले आफ्रनो मत खसाल्न जाँदैनन् । जो हिन्दु र राजसंस्थाको पक्षमा भोट हाल्न चाहन्छन् तिनीहरुको घरमा आगो लगाइन्छ, मारिन्छ भनेर हिन्दुवादी र राजावादीलाई धम्की दिइन्छ ।
विश्वको एक मात्र हिन्दुअधिराज्य नेपाललाई भारतका सम्पूर्ण हिन्दुहरु, विश्वभर छरिएर रहेका हिन्दूहरु, नेपाललाई विश्वको एक मात्र हिन्दुअधिराज्यको रुपमा गौरव गर्छन् । अतः हामी सबै नेपालीहरुले हिन्दुअधिराज्य र राजसंस्थाको सम्मान गर्ने गरिनुपर्छ ।
–(दीर्घराज प्रसाईको फेसबुक वालबाट)